नेपाली कामदार अापूर्ति गर्न मलेसिया सकारात्मक छ : कार्यवाहक राजदूत खरेल
भदौ २८, २०७५| प्रकाशित १३:४८
नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मानिएको मलेसियामा केही समययता कामदार आपूर्ति रोकिएको छ। तर त्यहाँका नागरिकसँगै सरकारको मन नेपालीले जितेका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपालीलाई सुरक्षा गार्डमा रुचाइएको छ। गोर्खा सैनिककै पालादेखि नेपालीप्रति मलेसियाको विश्वास बढेको हो। ४० प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ति गर्दा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट दिने गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले बताएका छन्। खरेलसँग नेपाल लाइभका रमेश भारतीले गरेको कुराकानी :
मलेसियामा नेपाली श्रमिकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? नेपालीका लागि मलेसिया कतिको सुरक्षित गन्तव्य हो?
दुई वर्षदेखि नेपाली युवाको आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुकभित्र मलेसियाको श्रम बजार परेको छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था राम्रै छ। केही मझौला र साना कम्पनीमा रोजगारीका लागि आएका केही नेपाली कामदारले छुटफुट रुपमा समस्या भोगिरहेका छन्। अन्य कामदारको अवस्था राम्रै छ।
नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको श्रम बजार माध्यम खालको छ। हावापानी नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ। तर, कमाइ भने खासै उच्च छैन।
तर पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको श्रम बजार सुरक्षित नै मान्नुपर्छ। राम्रा र ठूला कम्पनीमा रोजगारीका लागि आएका कामदार धेरै सुरक्षित छन्। उनीहरूले सेवा सुविधा पनि राम्रै पाएका छन्।
कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्ने संस्था बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई मलेसिया सरकारले कसरी लिएको छ?
रोजगारीका लागि मलेसिया आउने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक शोषण गदै आएका संस्था बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई मलेसिया सरकारले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।
उक्त निर्णयलाई मलेसिया सरकारले नेपालको आन्तरिक ममिला भनेर बुझेको छ। श्रममन्त्री विष्टको उक्त निर्णयपछि मलेसिया सरकारले पनि विदेशी कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक शोषणलगायत अन्य गतिविधि गर्दै आएका संस्था नियन्त्रण गर्ने चासो देखाएर त्यस्ता संस्था बन्द गर्ने काम गर्ने सुरु गरेको छ।
साबिकको कामदार आपूर्ति प्रणाली खारेजीको निर्णयपछि दूतावास बारम्बार छलफलमा जुट्दै आएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
नेपाल सरकारको निर्णयपछि मलेसिया सरकारले श्रम सम्झौता गरी श्रमिक आपूर्ति गर्न इच्छुक देखिएको छ। मिति तोकिएको छैन तर, छिट्टै श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सम्झौता हुन्छ। यो राम्रो पक्ष हो।
मलेसिया सरकार नेपालसँग सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि (एमओयु) गरेर नै कामदार पठाउने पक्षमा अडान लिँदै आएको छ। यो विषयमा सरकारीस्तरमै पटकपटक गहन छलफल भइसकेको छ, छलफल जारी छ।
रोजगारदाता कम्पनीले दिएका सेवा शुल्क बिचौलिया र म्यानपावर कम्पनीले मिलेर खान्छन्। अनि उल्टो मलेसिया आउने कामदारसँग पैसा असुलेर दोहोरो फाइदा लिन्छन्।
दूतावाससँग भएको उच्चस्तरीय छलफलमा मलेसिया नेपालसँग श्रमिक आपूर्तिमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान गर्ने पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति रोकिँदा मलेसियाको आन्तरिक श्रम बजारमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। जसका कारण मलेसिया नेपालसँग छिट्टै श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने चाहन्छ। नेपालको पछिल्लो निर्णय कस्तो आँउछ भनेर अन्य कामदार आपूर्तिकर्ता देश पनि प्रतीक्षारत छन्।
नेपाली श्रमिकको आपूर्ति रोकिँदा मलेसियाका रोजगादाता कम्पनीले कामदार अभाव झेलिरहेको सुनिन्छ, यथार्थ वस्तुस्थिति के हो?
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीको रोजाइमा नेपाली श्रमिक पर्छन्। नेपालबाट कामदार आपूर्ति रोकिदाँ मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी चिन्तित भएकै हुन्। मलेसिया सरकार पनि यो विषयमा गम्भीर छ। नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति रोकिदाँ मलेसियामा सुरक्षा गार्डको अभाव भएकै हो। जसका कारण मलेसियाको आन्तरिक श्रम बजारमा समयमा श्रमिक आपूर्ति नहुँदा केही अप्ठ्यारा छन्।
मलेसियन नागरिकबाहेक विदेशी कामदारको हकमा नेपाली कामदारलाई मात्र सुरक्षा गार्डमा लिने गरेका छन्।
मलेसियन नागरिकले नेपाली कामदारलाई आजसम्म पनि गोरखा सैनिकको पालामा जस्तै विश्वास र सम्मान गर्दै आएका छन्। सुरक्षा गार्डमा विश्वास गरेर नेपाली कामदारलाई राख्ने गरेका छन्। नेपालबाट करीब मासिक १० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया आउने गरेका थिए। मलेसियाले १० हजार कामदार तत्काल अन्य देशबाट आपूर्ति गर्नसक्ने सम्भावाना पनि छैन। जसका कारण श्रमिक कम भएको महसुस त भएकै छ।
कामदार आपूर्ति गर्ने साबिकको प्रणाली खारेजीको निर्णयपछि मलेसियाले नेपाली कामदारप्रतिको नीति परिवर्तन गर्नेसक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, त्यस्तो किन देखिएन?
मलेसिया सरकार र रोजगारदाता कम्पनी दुवै नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने पक्षमा छन्। जसका कारण नेपाली कामदारप्रति मलेसिया सरकार उदार बनेको हो। मलेसियामा नेपाली कामदारको आफ्नै छवि छ। जसका कारण मलेसियन नागरिकले अन्य देशको तुलनामा नेपाली कामदार लिन चाहन्छन्।
एउटा कम्पनीमा काम गर्न आएका श्रमिक राम्रो कमाउने प्रलोभनमा परेर कम्पनी छाडेर भागेर काम गर्ने गरेका छन्। यस्तो गर्दा उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
मलेसियाका रोजगाारदाता कम्पनी नेपाली श्रमिक नै आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिइरहेका छन्। त्यही भएर मलेसिया सरकार नेपाली कामदार आपूर्तिमा उदार भएको हो।
अब मलेसिया सरकारले कुन मोडलमा श्रम सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ? सम्झौताका लागि नेपाल पक्षको तयारी कस्तो छ?
सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता (एमओयु) हुन्छ। श्रम सम्झौताका लागि दुवै देश सकारात्मक भएर मस्यौदा आदान–प्रदान गरिसकेका छन्।
मलेसिया सरकारले श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा सहितको पत्र नेपाल पठाएको थियो। उक्त पत्रको जवाफसहित नेपालका तर्फबाट फिर्ता पठाइसकेको छ। मलेसियाका सम्बन्धित निकायभित्र यो विषयमा छलपल भइरहेको खबर आएको छ। श्रम सम्झौताका लागि नेपाल पूर्ण रुपमा तयार अवस्थामा छ।
मलेसिया जाने कामदारका हकमा पनि फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट प्रणाली नै लागू हुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण लगाायतका अन्य आवश्यक शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै व्योहोर्ने गरी सम्झौता हुनेछ।
श्रमिक आपूर्तिमा मलेसिया श्रम सम्झौता गर्न सकारात्मक देखिनुको कारण के हो?
नेपाल सरकारले आर्थिक शोषणमा संलग्न संस्था खारेज गरेसँगै मलेसिया सरकारले त्यो विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ।
मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले यो विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छन्। मन्त्री कुलासेगरनले नेपालसँग सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता गरेर काम आपूर्ति गर्ने चासो दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
रोजगारदाता कम्पनी र मलेसियन नागरिकको नेपाली कामदारले मन जितेका कारण नै मलेसिया नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने सकारात्मक भएको हो। नेपाली श्रमिक इमान्दारी, ऊर्जाशील, छलकपट नगर्ने, मेहनती र कर्मशील भनेर मलेसियामा परिचित छन्। मलेसिया सरकार नेपाली कामदार गुमाउन चाहँदैन। यो प्रमुख विषय हो।
मलेसियामा धेरै नेपाली अवैध रुपमा कार्यरत छन् भन्ने सुनिन्छ, खास संख्या कति होला?
मलेसियामा करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब एक लाखभन्दा धेरै अवैधानिक तरिकाले काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय दूतावासले मलेसिया आएका कामदारको तंथ्याक संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अहिलेसम्म अनुमानका भरमै तथ्यांक अड्कलबाजी गरिँदै आएको छ।
नेपाली कामदारलाई अवैधानिक बनाउने गैर–आवसायी नेपालीको ठूलो भूमिका रहेको छ। एनआरएनले रोजगारीमा कायरत कामदारलाई हुदाँ खाँदाको काम छोडाएर अवैधानिक बाटो अपनाउन लगाएर फाइदा लुटने गरेका छन्।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ?
मलेसिया रोजगारीका लागि आएका कामदारको ठूलो समस्या भनेको कम्पनी छोडेर भाग्ने हो। एउटा कम्पनीमा काम गर्न आएका श्रमिक राम्रो कमाउने प्रलोभनमा परेर कम्पनी छाडेर भागेर काम गर्ने गरेका छन्। यस्तो गर्दा उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
कम्पनी छाडेर भागेपछि त्यो कामदार मलेसियाको कानुनमा अवधै ठहर्छ। यसरी कम्पनी छाड्ने भागेका कामदारका मृत्यु, बिरामी र अंगभंग भयो भने उपाचारका लागि सहयोग गर्न दूतावासलाई कठिन हुन्छ।
नेपालबाट एजेन्टाका भरमा आएका कामदार धेरै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। त्यसरी आएका कामदार उद्धार गर्न दूतावासलाई समस्या हुने गरेको छ।
मलेसिया रोजगारीमा आउने कामदारलाई कामका बारेमा राम्रो जानकारी लिएर, एजेन्टपछि लागेर होइन म्यानपावरमार्फत नै र सरकारले तोकेको सेवा शुल्क तिरेर मलेसिया आउन अनुरोध गर्दछु।
मलेसियामा बिचौलियाले नेपाली कामदारसँगै धेरै म्यानपावर कम्पनीलाई पनि फसाउने गरेका छन्।
मलेसियाका करीब ४० प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिने गरेका छन्।
यसरी रोजगारदाता कम्पनीले दिएका सेवा शुल्क बिचौलिया र म्यानपावर कम्पनीले मिलेर खान्छन्। अनि उल्टो मलेसिया आउने कामदारसँग पैसा असुलेर दोहोरो फाइदा लिन्छन्। यो विषयमा दूतावास सचेत भएर काम गरिरहेको छ।
कार्यवाहक राजदूत भएर काम गर्दा तपाईंले कस्ता विषयमा चुनौती पाउनुभएको छ?
श्रोत साधन र थोरै कर्मचारी भएका कारण कामदारका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएको छैन।
सकेसम्म कामदारलाई समस्या पर्नै नदिने गरी दूतावासका काम गरिरहेको छ। रोजगारीमा आई मलेसियामा अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार, मृत्यु भएका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन प्रक्रिया र कामदारका पक्षमा रोजगारदाता कम्पनीमा सहजीकरण गर्ने काम दूतावासले गरिरहेको छ।
चुनौती त धेरै छन् तर सामाना गरेर काम गरिरहेका छौं कामदारमा चेतनाको कमी छ। यसका लागि पहल गरिरहेको छु।
मलेसिया जान चाहने नेपाली युवालाई के सुझाउनुहुन्छ?
मलेसिया आउनुअगाडि मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको वेबसाइटबाट सबै सूचना र जानकारी उपलब्ध भएकाले हेर्न अनुरोध गर्छु। अरु लहैलहैमा लागेर कम्पनी नछाड्न साथै करार अवधि सकिएपछि अवैधानिक भएर काम नगर्ने पनि आग्रह गर्दछु।
Malaysia xeto khulaunu paryo mero visa gako jeth maina ko3gate aako ho rw ma aahele Malaysia jana pako xaina k aba Malaysia khuleyo vanni ma jana pauxu ki paudena ra Malaysia khulxa ki nai aba ani kahele sama khulxa Malaysia mero visa ko time pani sakiyo jasto lauxa malai k aba ma kalo suchi ma paryko ho ra